Samy manohy ny dia, tafakatra ho amin’ny dingana faharoa amin’ny fifanintsanana amin’ny CHAN 2020 i Madagasikara sy Namibia. Namibia no ekipa manaraka hifandona amin’i Madagasikara.
Voatazon’i Comores ady sahala samy tsy nitoko i Namibia tamin’ny lalao miverina tany Namibia androany. Efa nandresy 2 noho 0 anefa i Namibia tamin’ny lalao mandroso tany Comores ka io no mitondra azy ireo ho amin’ny dingana manaraka.
MAMA: Mitaky ny tsy anakorontanana ny rafitra misy
Namory mpanao gazety ny teo anivon'ny orin'asa fiantohana MAMA omaly sabotrsy 03 jolay, mangataka izy ireo mba tsy ho korontanina ny rafitra efa misy, sy ny fitantanana efa mandeha.
Marihina moa fa efa nisy ny fivoriana natao tany Nosibe hell ville tamin'ny taona lasa teo, ary nisy tamin'izany ny fiantsoana ireo mpikambana nahafeno ny fepetra amin'ny maha mpikambana teo anivon'ny MAMA.
Match aller Madagascar 1 - 0 Mozambique
En cas d'égalité, les buts extérieurs sont multipliés par 2
Mozambique 3 - 1 Madagascar
Fin 1ère mi-temps
Mozambique 3 - 0 Madagascar